Thwebula Microsoft Visual C++ Redistributable 14.11.25325 ... – Vessoft
WindowsUhleloIzandisoMicrosoft Visual C++ Redistributable
Ikhasi elisemthethweni: Microsoft Visual C++ Redistributable
I-Wikipedia: Microsoft Visual C++
Microsoft Visual C ++ Redistributable – a platform isofthiwe ukucabanga okuqukethwe okuyinto athuthukiswe C ++ imvelo. Microsoft Visual C ++ Redistributable isetshenziselwa bandise izici interactive kanye multimedia ye-computer. Microsoft Visual C ++ ukufakwa izingxenye sokusebenza, okuyizinto ezidingekayo ukuze kuqale kanye nomsebenzi efanele izicelo ahlukahlukene, software kanye imidlalo.
Ukuqinisekisa yokusebenza efanele software kakhulu futhi izicelo
Ukunwetshwa izici ze kanye multimedia ye-computer
Sokushona Visual C ++ Imitapo imvelo
Thwebula Microsoft Visual C++ Redistributable
Isethi izingxenye ezidingekayo ukuze ukusebenza le software futhi web isicelo esekelwe bokwakha .NET. Isofthiwe isekela izilimi ezihlukahlukene izinhlelo.
Amazwana ku Microsoft Visual C++ Redistributable
Microsoft Visual C++ Redistributable software ehlobene
I-Easeus Partition Master – isoftware ilawula ukuhlukaniswa kwe-hard disk, ukwahlukaniswa kwabo noma ukuhlanganisa, ukuhambisa, ukubheka, ukuguqula kanye nokubuyiselwa.
Ithuluzi lokusekelayo uphinde uthole idatha yohlelo. Isoftware ivumela ukudala ikhophi le-hard drive futhi idlulise imininingwane kwenye yesiphathi sedatha.
Leli yithuluzi lokulungisa amaphutha ngokomzimba wezinkinobho ezinzima noma ze-floppy. Isofthiwe inikeza izindlela ezahlukene zokusebenza futhi inikeza imiphumela eningiliziwe yokuskena.
Isofthiwe for the yokumodela lezinto in 3D projection. Umsebenzisi amathuba ukudala izakhi ezahlukene ukuze emisebenzini yakhe siqu.
Ithuluzi ukubona ususe amagciwane noma izinsongo ezahlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba asuse izinhlobo ezahlukene amagciwane futhi silungise izinkinga ebhukwini ohlelweni onegciwane.
Ithuluzi elinamandla sokufuna amazwi ezidingekayo nemishwana. Isofthiwe ubonisa izincazelo kanye indlela efanele yokubiza amagama lamazwi atholakala futhi ukukhethela bomcondvofana nobe bomcondvophika kubo.